Nagu Saabsan - Daabacaadda Aqoonta Co., Ltd.
Sanadkii 2012, amarradeenna ayaa sii kordhay, sidaa darteed waxaan u baahan nahay inaan soo iibsano qalab badan oo aan u gudubno aqoon-isweydaarsiga weyn. Sidaa darteed, waxaan iska diiwaangelinay shirkad noo gaar ah ---Qingdao Shukeynta Ganacsiga Ganacsiga Co., Ltd. Sanadka 2017, iyadoo la horumarinaayo warshadaha baakadaha, waxaan u baahanahay inaan diiwaan galino calaamado badan oo ganacsi, cilmi baaris iyo inaan horumarino tikniyoolajiyad dheeri ah, sidaa darteed waxaan aasaasnayDaabacaadda Aqoonta ee Qingdao Co., Ltd. si gaar ah loogu talagalay baakadaha waraaqaha iyo daabacaadda alaabada.
Waxyaabaha ugu waa weyni waa sanaadiiqda, bacaha waraaqaha, buugaagta, kaararka salaanta, iwm. Warshaddeenu waxay ku taalaa Jimo, Qingdao waxayna leedahay khibrad wax soo saar hodan ah oo ka badan 16 sano. Waxaan xiriir iskaashi oo muddo dheer leh la leh guryaha daabacaadda caan ka ah ee maxalliga ah iyo shirkadaha hadhuudhka iyo saliidda.
Waxaan leenahay mashiinno daabacaad u gaar ah, teknolojiyad, kormeerayaal tayo leh iyo shaqaale. Laga soo bilaabo sanadka 2018, waxaan bilownaa ganacsi dibedda ah, maxaa yeelay waxaan uruurinay khibrad hodan ah habka gaarsiinta, tayada & gaarsiinta waqtiga xakamaynta iyo qaababka dhoofinta, waxkastoo ka badan, waxaan ku bixin karnaa qiimo aad u faa'iido badan warshadan.
Suuqgeena Ugu Weyn
Mareykanka, Mareykanka, Kanada, Mexico, Australia, Yurub, Koonfur Bari Aasiya, Ruushka, Shiinaha, Jabaan, Kuuriya, Bariga Dhexe, Afrika, Koonfurta Ameerika, Iwm
Dad kaladuwan ayaa jecel naqshadaha kala duwan
Naqshad wanaagsan ayaa aad muhiim ugu ah sanduuqyada qaabeeya buugga. Waxaan leenahay koox naqshadeyn u gaar ah oo shirkad ah. Hadaad ubaahantahay naqshado cusub, waan kaa caawin karnaa. Taas macnaheedu waa, waxaan bixin karnaa adeegyo hal-joog ah oo naqshadeyn ah illaa wax soo saar ilaa dhoofinta, marka waxaan nahay xulashadaada ugu fiican.